အနုပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ သာမန်လူ​တွေနဲ့ လက်ထပ်​တော့မယ့်အ​ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသိ​ပေးခဲ့ကြတဲ့ Idol များ
K-Pop ​လောကထဲမှာဆိုရင် Idol ​တွေ ရည်းစားထားတာနဲ့ လက်ထပ်တာကို ပရိသတ်​တွေက သိပ်ပြီး​တော့ သ​ဘောတူကြည်ဖြူ​လေ့မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ​အေဂျင်စီ​တွေကလည်း ရည်းစားထားတဲ့ကိစ္စကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားပါတယ်။ Idol ​တွေလည်း လူသားပဲမို့ ရည်းစားထားချင်တာ၊ အိမ်​​ထောင်ပြုချင်တာက သဘာဝပါပဲ။ ဒါ​ပေမဲ့ ပရိသတ်​တွေ ပြစ်တင်​ဝေဖန်တာကို ခံရမှာစိုးတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ relationship ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထု​တ်မ​ပြောရဲပဲ လူမသိ​အောင်သာ တွဲကြရပါတယ်။
ဘာ​ကြောင့်လဲဆို​တော့ ယခင်ကဆိုရင် ရည်းစားထားမိတဲ့အတွက် အဖွဲ့က ထုတ်ခံလိုက်ရတာ​တွေ၊ ကုမ္ပဏီက နှင်ထုတ်ခံရတာမျိုး​တွေ၊ အနုပညာ​လောကမှာ ပြန်လည်​ခြေချလို့ မရ​​တော့တာမျိုး​တွေအထိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ပါပဲ။ ဒါ​ပေမဲ့ ​အောက်​ဖော်ပြပါ Idol (၇) ​ယောက်က​တော့ သူတို့ လက်ထပ်​တော့မယ့်အ​ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် ပရိသတ်​တွေထံ ရဲရဲဝံ့ဝံ့အသိ​ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ Idol ​တွေက​တော့
1. TVXQ အဖွဲ့ဝင် Changmin
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်​နေ့တုန်းက TVXQ အဖွဲ့ဝင် Changmin ဟာ သူလက်ထပ်​တော့မယ်အ​ကြောင်းကို လက်​ရေးစာနဲ့ ကိုယ်တိုင်​အသိ​ပေးကြေငြာခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကို အံ့အားသင့်​စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာထဲမှာ သူက ဒီစာကို ​ရေး​နေစဉ် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှား​နေတယ်လို့ ​ပြောထားပြီး လက်ရှိ သူတွဲ​နေတဲ့ မိန်းက​လေးနဲ့ ကျန်တဲ့ဘဝကို ရှင်သန်သွားချင်တယ်ဆိုပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတည်းက သူ့ထက် အသက်ငယ်ပြီး အနုပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ သာမန်မိန်းက​လေးတစ်​ယောက်နဲ့ တွဲ​နေ​ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တာပါ။ Changmin ဟာ အဲ့ဒီမိန်းက​​လေးနဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်​နေ့မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပါတယ်။
2. EXO အဖွဲ့ဝင် Chen
​နောက်ထပ် SM အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chen ဟာလည်း မနှစ်က သူအိမ်​ထောင်ပြု​တော့မယ့် အ​ကြောင်းကို ​ကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့ပြီး ဒီသတင်းဟာ ထိုအချိန်က K-Pop ​လောကမှာ လူ​ပြောအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ​ကြောင့် Chen ကို မုန်းတဲ့သူ​တွေလည်း ရှိခဲ့ပြီး သူ့ကို EXO အဖွဲ့က နုတ်ထွက်ဖို့ ​ဆန္ဒထုတ်​ဖော်တာ၊ လက်မှတ်​ရေးထိုးတာ​​တွေ​တောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ TVXQ အဖွဲ့ဝင် Changmin လိုပဲ Chen ကလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက သူ့ရဲ့ ရင်​​သွေး​လေးကို လွယ်ထားရတဲ့ သာမန်မိန်းက​လေးတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်​တော့မယ်လို့ ​ပရိသတ်​တွေကို လက်​​ရေးစာနဲ့ အသိ​ပေးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ​နောက် သူ့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲကို အကျဉ်းရုံးကာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၀ ရက်​နေ့မှာ သမီးဦး​လေးကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။
3. Wonder Girls အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Hyerim
Wonder Girls အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Hyerim က​​တော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လမှာ သာမန်လူတစ်ဦးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်တည်းက တွဲ​နေခဲ့ကြတယ်လို့ လက်​ရေးစာနဲ့ ​ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် ၄ လအကြာမှာ ထိုချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်​​တော့မယ်လို့ ထပ်မံ​ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်သူက​တော့ တိုက်ကွမ်ဒိုလက်​ရွေးစင် Shin Min Chul ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Hyerim နဲ့ Shin Min Chul တို့ဟာ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်​နေ့မှာ ဆိုးလ်မြို့၊ ဂန်နမ်ခရိုင်မှာ မင်္ဂလာပွဲကို အကျဉ်းရုံးပြီး ​ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
4. Crayon Pop အဖွဲ့ဝင် Gummi
Gummi ဟာလည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာ အိမ်​ထောင်ပြုသွားတဲ့​ နောက်ထပ် K-Pop Idol တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီလက သူမနဲ့ သက်တူရွယ်တူ စီးပွား​ရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်​တော့မှာဖြစ်ပြီး ရင်​သွေး​လေးကို လွယ်ထားရ​ကြောင်း ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီနှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်​နေ့မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးရင်​သွေး​လေးကို သြဂုတ်လထဲမှာ ​မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့ပါတယ်။
5. Rainbow အဖွဲ့ဝင်​ဟောင်း Jisook
Jisook က​တော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလတည်းက programmer တဖြစ်လဲ စီးပွား​ရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနဲ့ ချစ်သူ​တွေဖြစ်​​နေခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ဒီ​နောက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MBC ရဲ့ “Don’t Be Jealous” အစီအစဉ်မှာ သူတို့ ၂ ဦး လက်ထပ်​တော့မယ့်အ​ကြောင်းကို ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Jisook နဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူ Lee Doo Hee တို့ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်​နေ့မှာ တရားဝင် ဇနီး​မောင်နှံ​တွေဖြစ်လာကြပြီး မင်္ဂလာပွဲကို မိသားစုဝင်​တွေ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်​ဆွေ​တွေကိုသာ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
6. Shinhwa အဖွဲ့ဝင် Jung Jin
​၂၀၂၀ ခုနှစ် ​မေလမှာ Shinhwa အဖွဲ့ဝင် Jung Jin က Twitter မှာ လက်​ရေးစာတစ်​စောင်ကို မျှ​ဝေခဲ့ပြီး ​လေယာဉ်မယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်တဲ့ သာမန်မိန်းက​လေးတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်​တော့မှာဖြစ်​ကြောင်း ပရိသတ်​တွေကို အသိ​ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Jung Jin နဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်သူမိန်းက​လေးတို့ဟာ အဲ့ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်​နေ့မှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ကြပါတယ်။ Jung Jin ဟာ Shinhwa အဖွဲ့ထဲမှာ အိမ်​ထောင်ကျသွားတဲ့ ဒုတိယ​မြောက် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
7. iKON အဖွဲ့ဝင် Bobby
iKON အဖွဲ့ဝင် Bobby က​တော့ အခုထိလက်မထပ်ရ​သေးပေမဲ့ သာမန်မိန်းက​လေးတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်​တော့မယ်လို့ ယခုနှစ် သြဂုတ်လက Instagram မှာ လက်​ရေးစာတစ်​စောင်တင်ပြီး ဖွင့်ဟ​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာထဲမှာ သူက သူချစ်ရတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး မကြာခင် ဖခင်ဖြစ်လာ​တော့မယ်လို့လည်း ​ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ အရမ်းကို ရုတ်တရက်ဆန်လွန်းပြီး သူ့မှာ ချစ်သူရှိ​နေတာကို လုံးဝကို မရိပ်စားမိခဲ့တာ​ကြောင့် K-Pop ပရိသတ်​တွေအားလုံး ​အကြီးအကျယ် ရှော့ခ်ရခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်​နေ့က Bobby နဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းက​လေးတို့ဟာ ချစ်စရာ သားဦး​လေးကို ​ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အထက်​ဖော်ပြပါ idol ​တွေဟာ သူတို့ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် အရာရာကို စွန့်လွှတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်​နေတဲ့ပုံပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူကို ဘယ်​လောက်ထိ တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်မြတ်နိုးလည်းဆိုတာလည်း ​ပေါ်လွင်​​နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ အချစ်စစ်၊ သတ္တိနဲ့ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှု​တွေကလည်း တကယ်ကို အထင်ကြီး​လေးစား​လောက်စရာပါပဲ။
Next ပရိသတ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အများကြီးစိတ်ပူပန်ပေးနေတဲ့ D.O. လေး »
Previous « ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကို စိုးမိုးထားတဲ့ အသက် (၃၀) အရွယ် ရှောင်ကောကော ၆ ဦး
တခေတ်တခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Kpop Queen “T-ara” အဖွဲ့ kpop လောကထဲမှာ ပြန်လည်ဦးမော့လာတော့မှာလား